Tatitra Momba ny Fivoriana Fanao Isan-taona 2014 | Vavolombelon’i Jehovah
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Basque Boligara Chichewa Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Grika Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kabyle Kinyarwanda Kirundi Kongo Koreanina Krio Kroaty Litoanianina Malagasy Malayalam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Ndebele (Zimbabwe) Norvezianina Oromo Ossète Ourdou Ouzbek Pendjabi Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tahisianina Tajiki Tamoul Tarasque Tiorka Tlapanèque Totonac Tseky Tzotzil Télougou Umbundu Valencienne Xhosa Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa tzeltal Éwé
Tatitra Momba ny Fivoriana Fanao Isan-taona 2014
Zato Taona ny Fanjakan’Andriamanitra!
Olona 19 000 teo ho eo no nanatrika an’ilay fivoriana faha-130 nataon’ny fikambanana Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Natao tamin’ny 4 Oktobra 2014 izy io, tao amin’ny Efitrano Fivoriamben’ny Vavolombelon’i Jehovah any Jersey City, any Etazonia. Nampitaina tamin’ny alalan’ny video tany amin’ny toerana maromaro koa ilay fandaharana.
I Mark Sanderson, anisan’ny Filan-kevi-pitantanan’ny Vavolombelon’i Jehovah, no mpanolotra fandaharana. Teo am-panombohana, dia nasongadiny fa tena hiavaka ilay fivoriana amin’ity taona ity, satria hanamarihana ny faha-100 taona niorenan’ny Fanjakan’ny Mesia.
Niresaka zavatra niavaka telo notanterahin’ilay Fanjakana tao anatin’izay zato taona izay ny Rahalahy Sanderson:
Asa fitoriana maneran-tany. Notahin’i Jehovah ny vahoakany, ka tsy nikely soroka nitory ny vaovao tsaran’ilay Fanjakana. Nitombo be ny isan’ny mpitory, satria an’arivony monja izy ireo tamin’ny 1914 nefa valo tapitrisa mahery tamin’ny taom-panompoana 2014. Hazoto hitory foana isika mandra-pitenin’i Jehovah hoe vita ny asa.
Voaro ny vahoakan’ilay Fanjakana. Nanenjika mafy ny Vavolombelon’i Jehovah ny mpitondra fivavahana sy ny mpanao politika, ary nitady handripaka tanteraka azy ireo mihitsy aza. Niaro ny mpanompony tamin’ny fitambarany anefa i Jehovah. Imbetsaka isika no nandresy tany amin’ny fitsarana. Ohatra hoe tany amin’ny Fitsarana Tampony Amerikanina sy tany amin’ny Fitsarana Eoropeanina Momba ny Zon’olombelona. Manaporofo izany fa mbola miaro antsika foana i Jehovah hatramin’izao.
Olona isan-karazany nefa miray saina. Nahavita nampiray saina olona isan-karazany, avy amin’ny firenena sy fiteny samihafa ny Fanjakan’Andriamanitra. Afaka nandresy zava-tsarotra maro be izy ireo, ka lasa vahoaka tafaray. Hoy ny Rahalahy Sanderson: “I Jehovah Andriamanitra ihany no mahavita fahagagana hoatr’izany.” Nantitranteriny fa voninahitra lehibe ny manatrika an’io fivoriana fanao isan-taona manan-tantara io.
Video Ataovy Namanao i Jehovah.
Io no noresahina manaraka. Efa ho roa taona mahery izao no nisian’ireo video ho an’ny ankizy ireo. Video misy fanadinadinana ankizy avy any amin’ny tany samihafa aloha no nasain’ny Rahalahy Sanderson nojeren’ny mpanatrika. Tsotra ireo ankizy sady niteny tamin’ny fony, rehefa nankasitraka ny zavatra nianarany tamin’ireny video ireny. Nanohina ny fon’ny mpanatrika izany.
Nisy video vaovao naseho avy eo. Ny lohateniny dia hoe: “Hanampy Anao ho Sahy Hitory i Jehovah.” Maharitra 12 minitra izy io, ary miresaka ny tantaran’ilay ankizivavy israelita, izay sahy niresaka momba an’i Jehovah tamin’ny vadin’i Namàna. (2 Mpanjaka 5:1-14) Nalefa tato amin’ny jw.org io video io ny alatsinainy 6 Oktobra 2014, ary azo jerena amin’ny fiteny 20 mahery.
Nanao fampandrenesana ny Rahalahy Sanderson hoe misy an’io programa vaovao io azo ampiasaina amin’ny fitaovana elektronika. Tena manampy izy io ho an’ireo te hanitatra ny fanompoany, ka te hianatra teny vahiny. Misy teny sy fomba fiteny 4 000 mahery, amin’ny fiteny 18 ao. Mbola hiampy teny sy fomba fiteny hafa, ary fomba fitory sy zavatra hafa koa izy io.
Faly ny mpanatrika nahalala hoe misy tele vaovao an’ny Vavolombelon’i Jehovah, ao amin’ny Internet. Mbola amin’ny teny anglisy ihany aloha izy io, satria mbola andrana. Miainga avy any amin’ny foibe any Brooklyn, any Etazonia, io tele io, ary videontsika sy hirantsika ary tantara ara-baiboly henoina no halefany. Hisy fandaharana koa ao isam-bolana, ka rahalahy anisan’ny Filan-kevi-pitantanana na rahalahy mpanampy ny komity ao amin’ny Filan-kevi-pitantanana no hanao azy.
Nampijeren’ny Rahalahy Sanderson ny mpanatrika ny fandaharana voalohany amin’izy io. I Stephen Lett, anisan’ny Filan-kevi-pitantanana, no nanao azy. Naseho tao koa hoe ahoana no nahavitana an’io tele vaovao io. Azo nojerena nanomboka tamin’ny 6 Oktobra 2014 ny JW Broadcasting, ary ao amin’ny tv.jw.org no misy azy.
“Zato Taona Ilay Fanjakana ary Mbola Hitohy ny Fitondrany.”
Naseho tao amin’io video io hoe inona avy no nataon’ny Fanjakan’Andriamanitra mba hanampiana antsika hanatsara ny asa fitoriana. I Samuel Herd, anisan’ny Filan-kevi-pitantanana, no mpitantara tao amin’ilay video. Nisy tahirina horonan-tsary sy zava-nitranga naverina nolalaovina tao, sady nisy fitantarana nataon’ny Vavolombelona efa hatramin’ny ela. Nasongadin’ilay video ireo fomba fitory efa nampiasaina, toy ny “Fampisehoana An-tsary ny Famoronana”, grafofaonina, karatra fitoriana, filaharana eny amin’ny arabe, ary fiara misy fanamafisam-peo. Naseho tao koa ireo sekoly mampiofana antsika hahay hitory.
Inona no soa raisintsika rehefa misaintsaina ny zava-bitan’ilay Fanjakana tao anatin’ny zato taona isika? Lasa mino kokoa isika hoe tena misy ilay Fanjakana, ary vao mainka tsy andrintsika ny hahitana ny zavatra hataony amin’ny hoavy.
Hira fiderana an’i Jehovah.
Faly be ny mpanatrika rehefa nilaza i David Splane, anisan’ny Filan-kevi-pitantanana, hoe hohavaozina ny fihiranantsika Mihirà ho An’i Jehovah. Hatao mitovy amin’ny Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao ny fitaovana hanamboarana ny fonony sy ny sisiny. Rehefa mampiasa an’ireo fitaovana faran’izay tsara ireo isika, dia mampiseho hoe manana toerana ambony eo amin’ny fivavahantsika ny hira.
Nilaza koa ny Rahalahy Splane fa hampiana hira vitsivitsy ny fihirana. Tsy voatery miandry an’ilay izy ho vita pirinty anefa isika vao hampiasa an’ireo hira vaovao. Halefa ao amin’ny jw.org izy ireo raha vao vita.
Nohiraina tamin’ilay fivoriana fanao isan-taona ny hira vaovao telo, izay efa nianaran’ny mpianakavin’ny Betela tamin’ny fiandohan’io herinandro io. Ny Rahalahy Splane no nitarika an’ireo mpihira rehefa nataon’izy ireo ilay hira hoe: “Efa Mitondra Ilay Fanjakana.” Nosoratana manokana mba hanamarihana ny faha-100 taona niorenan’ny Fanjakan’Andriamanitra izy io. Rehefa avy nihira ireo mpihira, dia nihira niaraka tamin’izy ireo koa ny mpanatrika. Nanao hira vaovao hafa izy ireo, taoriana kelin’izay. Ny lohateniny dia hoe: “Omeo Fahasahiana Izahay.”
Fanadinadinana. I Gerrit Lösch, anisan’ny Filan-kevi-pitantanana, no nanao azy io. Video izy io, ary fanadinadinana mpivady telo efa nanompo an-taonany maro tao amin’ny Betela. Nitantara izy ireo hoe nahita fiovana be dia be nandritra izay taona maro izay, ary manaporofo izany fa mandroso foana ny vahoakan’i Jehovah. Nilaza ny Rahalahy Lösch fa efa voalazan’ny Baiboly mialoha hoe hihatsara ny fandaminan’i Jehovah. Nampirisihiny koa ny rehetra mba hiara-mandeha amin’izy io foana.—Isaia 60:17.
“Ny Tandindona sy ny Tena Izy.”
Ny Rahalahy Splane no nanao an’io lahateny io. Nohazavainy hoe nahoana ny bokintsika no tsy miresaka matetika momba ny tandindona sy izay mifanitsy aminy, toy ny taloha.
Nolazaina taloha hoe mifanitsy amin’ny Kristianina tsy mivadika ankehitriny ireo lehilahy sy vehivavy tsy nivadika resahin’ny Baiboly. Noheverina koa hoe mifanitsy amin’ny zavatra iainan’ny mpanompon’Andriamanitra ankehitriny ny tantara maro ao amin’ny Baiboly. Marina aloha fa mety hahafinaritra ny mianatra fampitahana toy izany. Nahoana anefa ny bokintsika tato ho ato no tsy dia niresaka momba ny tandindona sy izay mifanitsy aminy?
Milaza ny Soratra Masina fa tandindon’ny zavatra lehibe kokoa ny olona na zavatra sasany resahiny. Rehefa milaza mazava ny Baiboly hoe tandindon’ny zavatra amin’ny hoavy ny zavatra iray, dia manaiky isika. Hoy ny Rahalahy Splane: “Rehefa tsy miteny anefa ny Baiboly, dia tsy miteny koa isika.” Tsy tokony halefantsika lavitra loatra ny saintsika rehefa mamaky tantara iray isika. Raha lany fotoana mandinika momba ny tandindona sy izay mifanitsy aminy isika, dia tsy ho hitantsika indray ny lesona tokony hampiharintsika avy amin’ilay tantara, na manantena ho any an-danitra isika na manantena ho eto an-tany.—Romanina 15:4. *
“Hiambina Hatrany ve Ianao?”
Ny Rahalahy Lett no nanao an’io lahateny io. Nanome fanazavana vaovao momba an’ireo virjiny folo tao amin’ny fanoharan’i Jesosy izy. (Matio 25:1-13) Izao no hevitr’ilay fanoharana: I Jesosy ilay mpampakatra, ary ireo virjiny dia ny voahosotra. (Lioka 5:34, 35; 2 Korintianina 11:2) Efa tanteraka amin’izao andro farany izao io fanoharana io, fa mandritra ny fahoriana lehibe izy io vao ho tanteraka amin’ny fomba feno. Rehefa niresaka momba an’ireo virjiny dimy adala i Jesosy, dia tsy nilaza izy hoe maro amin’ny voahosotra no hivadika ka hila hosoloana. Te hampitandrina kosa izy. Dimy ny virjiny malina ary dimy ny adala. Toy izany koa fa afaka misafidy ny voahosotra tsirairay hoe hiomana sy hiambina ve izy ireo sa hivadika.
Tsy fahendrena ny mikaroka hoe inona avy no mifanitsy amin’ny tsipiriany rehetra ao amin’ilay fanoharana. Izay lesona azontsika ampiharina amin’ilay izy no tokony hifantohantsika. Samy tokony hampamirapitra ny fahazavantsika sy ‘hiambina hatrany’ isika, na voahosotra na “ondry hafa.” (Matio 5:16; Marka 13:37; Jaona 10:16) Tsy afaka miantehitra amin’ny hafa isika, fa isika mihitsy no mila miezaka ny tsy hivadika. ‘Hifidy ny fiainana’ isika raha miambina foana sy mazoto amin’ny fanompoana.—Deoteronomia 30:19.
“Ilay Fanoharana Momba ny Talenta.”
I Anthony Morris, anisan’ny Filan-kevi-pitantanana, no nanao ny lahateny manaraka. Nanampy ny mpanatrika izy hahatakatra ny fanazavana vaovao momba an’ilay fanoharana momba ny talenta. (Matio 25:14-30) Takatsika izao fa hamaly soa an’ireo mpanompo (ireo voahosotra tsy mivadika mbola etỳ an-tany) ilay tompo ao amin’ilay fanoharana (Jesosy), amin’ny hoavy. Ho tonga izy amin’izay, ka hanangana azy ireo amin’ny maty mba hiaina any an-danitra. Rehefa niresaka momba an’izay hanjo an’ilay “mpanompo ratsy fanahy sady kamo” i Jesosy, dia tsy te hilaza izy akory hoe maro amin’ireo voahosotra no hivadika. Te hampitandrina an’ireo voahosotra kosa izy hoe tokony hazoto foana izy ireo, fa tsy hanao toa an’ilay mpanompo ratsy fanahy.
Inona no lesona raisintsika avy amin’io fanoharana io? Nanankina zava-tsarobidy tamin’ny mpanompony ilay tompo ao amin’ilay fanoharana. Nanankina zava-tsarobidy tamin’ny mpanara-dia azy koa i Jesosy. Tsy inona izany fa ny asa fitoriana sy fampianarana. Manantena izy fa hazoto hanao an’ireo asa ireo isika, arakaraka ny toe-javatra misy antsika. Nidera ny mpanatrika ny Rahalahy Morris, satria mazoto manao ny asan’ilay Fanjakana izy ireo.
“Iza no Hanafika ny Vahoakan’Andriamanitra Tsy ho Ela?”
Tena nahaliana ny foto-kevitr’io lahateny farany io, ary i Geoffrey Jackson, anisan’ny Filan-kevi-pitantanana, no nanao azy io. Noresahiny hoe hanafika ny vahoakan’Andriamanitra tsy ho ela i Goga avy any Magoga.—Ezekiela 38:14-23.
Nihevitra isika hatramin’izay fa anarana hafa iantsoana an’i Satana Devoly, tamin’izy noroahina avy tany an-danitra, ilay hoe Goga. Nametraka fanontaniana vitsivitsy niainga avy tamin’io fanazavana io ny Rahalahy Jackson. Nilaza, ohatra, i Jehovah fa rehefa ho resy i Goga, dia ‘homena ho sakafon’ny vorona mpihaza sy ny karazam-borona rehetra ary ny bibidia.’ (Ezekiela 39:4) Nilaza koa izy fa homena toerana hilevenana eto an-tany “i Goga sy ny vahoakany rehetra.” (Ezekiela 39:11) Ahoana anefa no hitrangan’ireo zavatra ireo amin’ny zavaboary ara-panahy? Halefa any amin’ny lavaka mangitsokitsoka mandritra ny arivo taona i Satana, fa tsy hoe hisy hihinana na halevina. (Apokalypsy 20:1, 2) Mbola hafahana avy ao amin’ny lavaka mangitsokitsoka koa i Satana, rehefa tapitra ny arivo taona. “Hivoaka hamitaka an’ireo firenena any amin’ny vazan-tany efatra, dia i Goga sy Magoga” izy. (Apokalypsy 20:7, 8) Mazava àry fa tsy ho afaka hamitaka an’i Goga i Satana raha izy ihany no Goga.
Nanazava ny Rahalahy Jackson fa tsy manondro an’i Satana i Goga avy any Magoga, fa firenena maromaro mitambatra izay hanafika ny vahoakan’Andriamanitra. Azo antoka fa ilay fanafihan’ny “mpanjakan’ny avaratra” sy ny “mpanjakan’ny tany” ihany ilay fanafihan’i Goga.—Daniela 11:40, 44, 45; Apokalypsy 17:12-14; 19:19.
Iza no mifanitsy amin’ilay “mpanjakan’ny avaratra”? Mila miandry isika mba hahalalana an’izany. Na ahoana na ahoana anefa dia mitombo foana ny fahatakarantsika ny dikan’ireny zavatra hitranga amin’ny hoavy ireny, arakaraka ny anatonan’ny fotoana hahatanterahany. Manatanjaka ny finoantsika izany. Tsy matahotra an’ilay fanafihana amin’ny hoavy isika. Fantatsika mantsy fa rehefa hanafika i Goga avy any Magoga, dia ho resy izy ary ho ringana tanteraka. Ny vahoakan’Andriamanitra kosa ho eo foana mandrakizay. *
Nanao fampandrenesana ny Rahalahy Sanderson hoe efa misy ny Baiboly fanao am-paosy, amin’ny Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao. Efa eo am-panomanana ny raki-peo amin’izy io koa izao ny fandaminana, ka olona samy hafa no hamaky an’ireo tenin’olona ao. Hanomboka any amin’ny Matio izany, ary halefa tsikelikely ao amin’ny jw.org.
Nilaza koa ny Rahalahy Sanderson fa ny andinin-teny ho an’ny taona 2015, dia ny Salamo 106:1 hoe: “Misaora an’i Jehovah fa tsara izy.” Nampirisihiny ny rehetra mba hitady antony isaorana an’i Jehovah isan’andro.
Ilay hira vaovao fahatelo hoe “Jehovah no Anaranao” no namaranana an’ilay fivoriana. Niakatra teny amin’ny lampihazo niaraka tamin’ireo mpihira koa izy fito mirahalahy anisan’ny Filan-kevi-pitantanana, rehefa nanao an’io hira mahafinaritra io ny rehetra. Nety tsara izany mba hamaranana an’io fivoriana manan-tantara io.
^ feh. 22 Niorina tamin’ny lahatsoratra hivoaka ao amin’ny Tilikambo Fiambenana 15 Martsa 2015 io lahateny io sy ireo lahateny roa taorian’io.
^ feh. 30 Niorina tamin’ny lahatsoratra hivoaka ao amin’ny Tilikambo Fiambenana 15 Mey 2015 io lahateny io.
Nahoana no manampy anao hiatrika olana ny fahaizana mankasitraka?
Zato Taona Nanaovana Hira Hiderana An’Andriamanitra
Ahoana no nampiasan’ny Vavolombelon’i Jehovah hira sy mozika teo amin’ny fivavahany?
Tatitra Momba ny Fivoriana Fanao Isan-taona Oktobra 2014
Fivoriana Fanao Isan-taona 2014